के तपाईको आँखा पनि फर्फराउँछ ? किन फर्फराउँछ थाहा पाउनुहोस् ! « Pen Nepal
Published On : 27 January, 2021 7:29 am By : पेननेपाल
एजेन्सी । के तपाईको आँखा पनि फर्फराउँछ ? यदी फर्फराउछ भने तपाई अवश्य यसलाई शुभ–अशुभसंग जोडेर हेर्नुहुन्छ होला ? यसको शुभ–अशुभसंग कुनै साइनो नभएकाले यसको चिन्ता विल्कुल नलिन चिकित्सकहरूले बताएका छन् । बरु आँखा फर्फराउने क्रम रहिरह्यो भने तपाईले आफ्नो स्वास्थ्य वारे चिन्ता लिनु पर्छ ।
भारतीय राष्ट्रिय बायोटेक्नोलोजी सेन्टरले प्रकाशन गरेको आलेखअनुसार आँखा फर्फराउनु –तनाव, एंग्जाइटी वा थकानका कारणले हुन्छ । यो भिटामिन –१२ को कमी हुँदा पनि हुन्छ । यदी लगातार दुई साताभन्दा बढी समयसम्म आँखा फर्फराए चिकित्सकलाई देखाउनु पर्छ । तर, फर्फराउने आँखा मात्र होइन् शरीरको अन्य अंग पनि फर्फराउन सक्छ ।
किन फर्फराउँछ ?
स–साना माँसपेशिहरूमा आउने संकुचनको कारण फर्फराउछ । जुन अंगमा यस्तो संकुचन हुन्छ त्यही अंक फर्फराउँछ । माँसपेशीहरू ती फाइवरहरूले बनेका हुन्छन् जसको नियन्त्रण तपाईको नशाहरुले गर्छन । कुनै नशामा खरावी आउनु वा ड्यामेज हुनु यस्को मुख्य कारण हो । आँखा फर्फराउनु परेलामाथिका भागमा बेला बेला हुने माँसपेशीमा संकुचन वा ऐंठन हो । यसलाई मेडिकल भाषमा ब्लेफरोस्पाज्म वा मायोकेमिया पनि भनिन्छ । सामान्यतया ः एउटै आँखा वा तइसकोमाथि वारम्वार फर्फराउँछ । पुरुषका तुलनामा महिलाका आँखा धेरै फर्फराउछन् ।